सबैभन्दा अचम्मको वस्तु मस्तिष्क | Ratopati
ब्रम्हाण्डकै सबैभन्दा अचम्मको वस्तु के हो ? प्रश्नको जवाफ धेरै हुन सक्छ । तर केही केही वैज्ञानिकहरु चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई नै संसारकै सबैभन्दा अचम्मको चीज मान्ने गर्छन् ।
उनीहरुका अनुसार, टाढा टाढा ब्रम्हाण्डका धेरै कुराहरु पत्ता लगाउने मानिसले अझै मानिसको मस्तिष्कभित्र के के छ ? यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पूरै थाहा पाइसकेका छैनन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार, हाम्रो मस्तिष्कमा १०० अरब स्नायु कोषहरु हुन्छन् । ती स्नायु कोषहरुमार्फत् मस्तिष्कमा र मस्तिष्कबाट शरीरका विभिन्न भागहरुमा सूचनाहरु आदान प्रदान हुने गर्छ । त्यसरी सूचना आदान प्रदान हुँदा त्यसको गति २७० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म हुने गर्छ ।